Mogadishu Journal » 2019 » May » 16
Mjournal :-Askari ayaa wararka hordhaca ahi sheegayaan in uu ku dhintay israsaasayn ka dhacday carun ay degan ka degan yihiin ciidanka loo yaqaan RRU oo qayb ka ah Booliska bariga magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool. Israsaasayntan ayaa wararku sheegayaan in ay u dhexaysey...
Mjournal :-Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa Shacabka Muqdisho uga digay in ay guryahooda ay ka kireeyan Shaqsiyaad aysan aqoon oo aysan soo marsiin taliska degmada iyo Xaafadda ay degan yihiin. Taliye ku xigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sakiyo Xuseen ayaa...
Police are on a high alert over a possible Al Shabaab attack during the holy month of Ramadhan. The National Police Service (NPS) Wednesday said they have intensified security to ensure Muslims are secured while conducting their prayers and avert any possible terrorist attacks on...
The African Union (AU) on Wednesday commended the “significant progress” made to secure peace and stability in Somalia under the AU Mission in Somalia (AMISOM). The AU Peace and Security Council (AU-PSC) said in a statement that it “acknowledged the significant...
Mjournal :-The Somali Federal Government’s decision to cancel and repeat national high school exams following a social media cheating scam has caused much concern among schools and regional authorities. Education minister Abdullahi Goddah Barre said fresh exams would be held from...
Mjournal :-Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa maanta soo saaray War-saxaafadeed ku Saabsan soo Saaridda iyo Dhoofinta Dhuxusha,iyada oo digniin laga soo saarayka dhoofinta Dhuxusha ee Soomaaliya. War-Saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka...
Mjournal :-Iran ayaa maanta ku eedeysay Mareykanka kasii darista “aan la qabli karin” ee xiisadda ka dhex oogan labada dhinac, waxayna sheegtay in Tehran ay muujineyso is-xakameyn, inkasta oo Washington ay ka baxday heshiiska Nukliyeer. Xiisadda labada dhinac ayaa cirka isku...
Mjournal :-Shirkadda diyaaradaha ee dalka Uganda ayaa markii u horreysay shaacisay inay dhowaan billaabayso duullimaad toos ah oo ay ku tagayso magaalada caasimadda ee Muqdisho. Duulimaadka Uganda Airlines ee Muqdisho ayaa qeyb ka ah duulimaadyo toos ah oo isku xiraya...
Mjournal :-Wararka laga helayo deegaano ka tirsan Gobolka Gedo ayaa waxaa ay sheegayan in dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada Dowladda oo ay wehlinayaan Ciidamada Itoobiya iyo Al-Shabaab uu ku dhexmaray deegaano hoostaga degmada Garbahaareey ee Xarunta Gobolka Gedo. Dagaalka...
Mjournal :-Masaajidada ku yaalla dalka Maraykanka ayaa wali waxaa la soo darsaya cabsi uga imanaysa kooxaha xagjiriinta ah ee Islaamka neceb, kadib markii toddobaadkan masjid ku yaalla gobolka Connectinut dab la qabadsiiyay. Masaajidada qaarkood ayaa sheegay in hanjabaado loo soo...
Mjournal :-Bishii Aprril 12-dii Kooxdii Magalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ka afduubatay Dhaqaatiirta u dhalatay dalka Cuba ayaa waxaa ay dalbadeen lacago madax furasho ah. Warbaahinta dalka Kenya gaar ahaan TV-ga Citizen ayaa baahiyey in Kooxdaas oo looga...
Mjournal :-Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax dhaliyey khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo shalay gelinkii dambe Ciidamada AMISOM lagula deegaanka Carbiska ee duleedka magaalada Muqdisho. Qaraxa oo ahaa Miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa warar la...
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa markii u horeysay ka hadlay shirkii natiijo la’aanta ku soo dhamaaday ee madaxda Soomaalida mudada shanta maalin uga socday magaalada Garowe. Madaxweyne Farmaajo oo xalay ka hadlayay Munaasabadda 15-ka May ayaa...